Vanoita Sei Vanovhundutsa Vatsva Abstract Artists Zvisikwa Kufunga?
DavidBridburg November 1, 2020 March 23, 2021
Abstract Artists uye Art: Dema uye Muchena, Tsananguro, Geometric, uye Yemazuva Ano
Semutangi achida kutanga kumwe kunhu kwehunyanzvi iwe unofanirwa kuti utange kumwe kunhu. Ndinovimba unowana zvinyorwa zvangu zvinonakidza kuverenga. KISS uye gadzira, iwe unogona kuve unonakidza usingaonekwe muimbi
Yakatwasuka kumberi disclaimer: nekunamatira kune yangu nyaya iwe unowana yakanaka kwazvo pfungwa yemunda weanoburitsa mifananidzo pasina yangu yekufungidzira nezve vamwe maartist.
Iwe une yakawanda mifungo nezve isingabvumirwe maartist. Isu tiri chigadzirwa chemidziyo yedu uye nenguva. Nhasi muzera redhijitari, ini ndiri Post Post muimbi. Kugadzira kubva pane zvakapfuura uye kupa chimwe chakasarudzika.
Nekufamba kwenguva hunyanzvi hwazvino husati hwasvika hondo isati yava yekufungidzira mushure meWW II. Pakazosvika ma1980, iyo pfungwa yekusanganisa yekufananidzira uye isingabvumirwe yakave inonakidza kune vazhinji maartist.
Pfungwa dzangu hadziwire pasi muzvikamu izvi. Ndichishandisa zvishandiso zvemadhijitari, ndiri kuzadzisa Post Yemazuva ano hunyanzvi dzidziso. Kazhinji ini ndinosanganisa maviri kana matatu marudzi muchikamu chimwe nechimwe chandinogadzira. Iko kusanganisa kwenguva ndiko kufunga kwangu kumashure kweanoverengeka emabasa angu echokwadi ehunyanzvi.
Nhasi kune kumutsiridzwa kweanoshamisira maartist avo vakasiyana zvachose nekuda kwedhijitari maturusi.
Sezvo iwe uchitarisa pamifananidzo yangu ziva kuti uri kuita mune yakasarudzika chiitiko.
Ini ndinopa yangu isingabvumirwe hunyanzvi uye zvimwe semaposta uye canvas prints.
Kutenda kune Abstract Artists
Ndisati ndatanga, ini ndoda kupa mbiri kune vakafanotungamira vangu. Kubva kuJMW Turner kuenda kuPicasso kuenda kuPollock kuna Franz Kline, uye nevamwe vazhinji vasinganzwisisike maartist.
Ini ndinopa rukudzo mune rangu rese basa kune avo vakauya pamberi pangu. Zvandakaita zvakasarudzika chaizvo, uye zviri pamuganhu wepakutanga chaipo. Ini ndanga ndoda yakawanda yeartist nhoroondo yekugadzira nzira yangu.
Ichi chinyorwa muenzaniso wekufunga kwangu nemifananidzo. Kuverenga izvi iwe unogona kutungamirwa kuti utende kuti ndiri asiriye muimbi. Abstract art ndeyechipiri mumuviri wangu webasa.
Abstract Art Dema uye Muchena
Nemifananidzo mitema nemichena, ini ndinosimuka kubva kune ezvematongerwo enyika chaizvo kusvika kumidzi chaiyo yePostmodernism yangu, iko kushandiswa kwenyanzvi dzekare.
Iri basa rekutanga rine zvematongerwo enyika. Ini ndichave ndakangwarira mukurega kupindura. Unogona kufunga nezve iri basa.
American Intellectual 4 naDavid Bridburg
Tumira Pop Pop, American Intellectual 4 inouya yakamisikidzwa saizi inosvika 9 x 4 tsoka. Zvidiki zvidiki zvidhindiro zvakanaka uye zvine simba zvakagadzirwa. Mifananidzo iri pasi peichi chidimbu ndiEdward S. Curtis mifananidzo.
Kushandisa kwangu kwePost Yemazuva ano dzidziso iri kuve pachena pachena. Zvandakaita kushandisa chifananidzo chekare kugadzira chifananidzo chitsva uchishandisa maturusi edhijitari.
"Heti yekare", unodaro. Zvakanaka mune dzimwe nzira iwe wakarurama. Musiyano ndewevatangi vekutanga vanoita hunyanzvi seyakafanana. Izvi zvakakomba hunyanzvi. Iye Mona Lisa haana siketi yake yakasimudzwa paanenge achiputa fodya.
Yangu artform inowira muPost Yemazuva ano dzidziso, asi iri kunze kwenguva. Iyo dzidziso yakasimbiswa chaizvo makumi emakore apfuura. Saka chii chinopa? Zvishandiso zvemadhijitari zvinopa. Pfungwa dzangu dzekufunga dzinopa. Zvekare zvinopa. Ino inopa. Iri ibasa idzva rekugadzira.
Zvishoma zvakanyatsoitwa nePostmodernism mune yehunyanzvi hwekuona sezvo dzidziso yakagamuchirwa. Muchokwadi semhando iyi paingova neuzivi chete. Munguva pfupi yapfuura maberere eNew York akaedza edhisheni yekutengesa yekuedza. Pfungwa yekumucheto yandinowedzera yakaburitswa kunze chete neni.
Iyo uzivi hwePostmodernism iri nyore kwazvo. Zvese zvakaitwa kare, tichishandisa zvakapfuura, tinogadzira chimwe chinhu chitsva kwazvo. Idzo mbiri dzakapfuura nyaya dzakadzora iyi genre pasi kushomeka kwemakomputa uye kushinga kwevapfuura maartist. Mifananidzo yekumusoro ndiyo yekupedzisira taboo muartworld.
Aya maviri anotevera zvidimbu zvehanzvadzi kana zvidimbu zvehama pamwe. Kuputika kwaMichelangelo "Chiumbwa chaDavid" chinotora nzvimbo yepakati.
Ose ari maviri ari mune yangu Contemporary Unganidzo. Imwe inotevera inotevera. Mutambo wacho haugamuchire. Pfungwa dzinokura muunganidzwa uyu. Nyaya yacho inova chinhu apo isu tichifamba kubva kubasa kuenda kubasa. Ipapo chinhu chinova chiratidzo cheminimalist.
Yazvino 11 Michelangelo naDavid Bridburg
Pakati pezviviri, ndakatanga nemufananidzo uyu pazasi. Ndakaona mubairo wangu wounyanzvi uye ndikagadzira mufananidzo uri pamusoro sezvakaratidzwa.
Chii chaifungwa naMichelangelo? Haa anga asiri iye asinganzwisisike. Hazvina kujeka kuti aizokwanisa kuona aya maviri mabasa ehunyanzvi. Tsika yake zvechokwadi yakaenda kare haina kumudzidzisa kwenguva ino munguva.
Kuna Michelangelo, aya mabasa maviri angangodaro asiri mabasa ekufananidzira zvachose.
Tevere kuwana zvematongerwo enyika zvakanyanya. Kumwoyo wezvematongerwo enyika edu nhasi.
Uyu mutema nemachena zviri zvekuve vashoma zviri mugungwa chena. Ini ndasaina semuartist mune nhema kuti nditore mativi.
Ichi chidimbu chinokumbira iwo mubvunzo, "vanhu vari kufungei"? Ini handikwerete pano kubva kune vamwe maartist. Ndinotora nzombe nenyanga ndotaura zvandauya kuzotaura.
Abstract Art Tsananguro
Kuita kuti izvi zvive zvakapusa sezvinobvira, hunyanzvi hunobva pane fungidziro yekubvisa. Kana iwe uine gumbeze remvere mumba memhuri yako funga nezve kungotora matatu mativi masendimita ayo. Wobva waputira iwo matatu masendimita pane matatu tsoka canvas. Iyo abstract haichazivikanwe sekwere kubva kugumbeze remvere.
Kune basa rehunyanzvi mune izvo. Iye zvino donhedza chero zvirevo zvekufananidzira, uye vhura nyika yekusika.
Chinhu chega chega dhizaini chinogona kushandiswazve. Imwe neimwe nzira inogona kushandiswazve. Abstract Expressionism inogadzirwa kubva ipapo.
Iwe unozogona kunakidzwa anotevera mashoma emifananidzo. Ivo Neo Cubism. Apa ndipo pandinotora Mondrian's Cubism. Kugadzira kwavo kuve Post Yemazuva Ano, Neo Cubism, uye isingabvumirwe art. Post Yemazuva ano kazhinji yangu amburera izwi.
Mondrian's Cubism yaive nezve geometric muyero. Aya mabasa maviri anonamata kuna Mondrian.
Abstract art geometric ndiyo nzira yayo yekubvisa. Izvi zvine basa nekuti ini ndinoshandura kune mamwe maitiro ekubvisa. Kunyanya hunyanzvi hwemazuvano hunobatika hunoshanda kumakoto kana mafomu ehupenyu.
Hukama hwepakati hwakasiyana mune yega yega. Ose ari maviri mativi. Iko hakuna ruvara rweruzivo muPost Yemazuva ano hunyanzvi. Panzvimbo pekushanda kuti ndishande ndakagadzira yangu yega dzidziso dzidziso. Kumwe kuenderana mune angu mavara dzidziso dzakange dzichishanda mukufananidza matoni pane seti yemavara mune chidimbu cheunyanzvi
Recent 24 naDavid Bridburg
Masiginecha mumabasa aya anotamba. Ndaiwanzoita rusununguko neunyanzvi hwangu.
Recent 25 naDavid Bridburg
Munguva pfupi yapfuura 27 kwaive kuyedza. Kutyora ndege nekuumba runyorwa kwakagadzira jagged abstract in motion.
Ndichiona ndichigona kunakidzwa, ndakadaidza ichi kuzvimiririra.
Recent 27 naDavid Bridburg
Munguva pfupi yapfuura 33 yakarongeka kwazvo, asi iyo yekugadzira yaive yakasarudzika. Zvekare iwo mavara akanyatsoenderana netoni. Iyo yekushongedza yakabatana.
Kamwezve nekuona izvo zvandinazvo, ndinogadzira Recent 34 ndichishandisa makumi matatu nematatu semuenzaniso wangu. Iri harichisiri basa risinganzwisisike rehunyanzvi. Izvo zvisikwa zvichiri geometric.
Svikira mune iyo geometric hunhu hwemazano Ini ndakagadzira iyo Muchinjikwa kunze kwematanho eakajeka mavara. Usambofa wakashandisa iyo chete vara kaviri. Uku kuyedzwa kunodhonzwa zvakanaka, kana ndikadaro ini pachangu.
Recent 35 naDavid Bridburg
Kune mamwe mashoma mamwe ejometri abstracts pakati peangu akaunganidzwa maunganidzwa. Ini ndoda kuvhara ichi chikamu chechinyorwa nechinhu chinonakidza kwauri.
Funga nezveJazz yazvino, pamwe Charlie Parker kana Miles Davis. Funga nezve yakaenderana rhythm.
Chii chakapunyuka maartist mazhinji, mutinhimira ndizvo zviri pasi. Iwo asinganzwisisike kurova kwe syncopation mune rakasiyana ruvara.
Oranges naDavid Bridburg
Ndiko kufunga kwangu. Ini ndinongova nema nugget mashoma ekukupa iwe pane mamwe maartist anofunga kuve akazara kumusoro newe.
Nguva pfupi x inoreva zvakafanana neshoko razvino x. Iniwo ndakaita izvi nemazwi eMimhanzi manotsi x kugadzira ephemeral pfungwa yekuve mune yangu Post Contemporary Unganidzo. Mune akawanda emamwe maunganidzwa angu, zita raRustic x muimbi, Blend x zita revatambi, uye Inv (erse) Blend x zita remunyori… ..etc…. zvinoshandiswa.
Post Pop Art yakaiswa muAmerican Intellectual Unganidzo yangu, American Intellectual x ndiyo inochengetedza nzvimbo. Hukama hwepamberi hukuru hwekufambisa hwakamanikidza kuburikidza neazvino mafambiro emisanganiswa achivhenganiswa pamwechete. Zvakare iro amburera genre ndiPost Yemazuva Ano.
Iko kuunganidzwa kwehunyanzvi pawebhusaiti yangu, Bridburg.com, dzakanyatsorongeka. Ini ndakamisa anoshanda ekuvaka ekugadzira hunyanzvi mukati meunganidzwa. Kufambisa iko kunovandudza hunyanzvi mukati meunganidzwa. Ipapo ini ndinogadzira seti nyowani yezvivakwa zveiyo nyowani yekuunganidza theme.
Vamwe vasinganzwisisike maartist vanoshandisa chinzvimbo chinobata chinzvimbo "chisina zita x". Sezvo maartist muma1960s nekupfuura vanoita izvi ivo vanorasika mune shuffle.
Gare gare pakutamisa hunobatika pamhepo nemazita ezvinzvimbo "zvisina zita x" zvinova zvinonetsa zvikuru kumakomputa. Zvakaipisisa zvakadaro kune maartist, ruzhinji harugone kutsvaga zvakavimbika mazita ekutanga se "asina zita x". Vazhinji veava vanyori vaishandisa mashoma mashoma mamwe mazita.
Basa rakarasikirwa nenguva.
Kunyangwe ini ndisiri weiyo chizvarwa cheartist uye ndisinganzwe kurwadziwa kwavo, mamiriro acho haatarisike kune avo mabara.
Zvinogona zvakare kukurukura newe panguva ino, ini handisi muenzi wegalari. Kutaura kwangu hakuna magedhi. Ndiri pano kutaura zvakananga nemi. Chinangwa changu kuvaraidzwa kwako.
Kana ndikazivikanwa gare gare pane izvo zvichave zvakanaka.
Abstract Art Yemazuva Ano
Kureba kwehunyanzvi hwazvino kwaive pamberi peWW II. Zvinoshamisa kufunga nezve kudzidzisa panguva iyoyo, Freud kuna Marx kuna Einstein. Nezvinangwa zvedu ngatitangei izvi naPicasso.
Pablo Picasso akanzwisisa zvese nezvenguva yake. Akanga ari muenzi asinganzwisisike. Akange asiri muimbi weAbEx.
Kubhadhara rukudzo kuna Picasso, ini ndinokuratidza mufananidzo wake uyo wakandikurudzira kwemakumi emakore.
Mukadzi naPablo Picasso
Mufananidzo wacho uri kuratidzwa sekushandiswa kwakanaka uye zvirokwazvo kwete kutengeswa neni.
Tevere ichi ndicho chirevo changu chazvino chazvino.
Recent 20 naDavid Bridburg
Kana iwo maviri anotevera mavara achiratidzika kunge asina kujairika kwauri izvo ndezvekuti ini ndinofunga Dixie Cups akashandisa uyu musanganiswa wemuvara. Pamwe mavara aDixie aive akapenya zvishoma.
Mufananidzo wacho unouya mukudhinda saizi kusvika pamamita mapfumbamwe seyakaumbwa. Uyu mufananidzo weAmerican Intellectual unotaura zvakawanda nezve hunyanzvi.
American Intellectual 18 naDavid Bridburg
Nguva yekumuka nemumhanzi rega muviri wako utambe yall.
Wese Munhu Heano dome, adzoka nema bass
Iyo jam iri kurarama mukuita uye ini handitambise nguva
Pane mic ine dope rwiyo
Svetukira kune mutinhimira, svetuka, svetukira kune iyo rhythm svetuka
Uye ini ndiri pano kuzobatanidza
Beats uye mazwi ekuita ako kuzunza bhurugwa rako
Tora mukana, huya utambe
Vakomana bata musikana, usamirira, kumuita twirl
Ndiyo nyika yako uye ndinongova tsindi
Edza 'kuti utore nzungu yekufambisa bhuti rako
Kune yekutamba pasi, saka yo zviri kumusoro
Maoko mudenga, huya uti "hongu"
Wese munhu aripano, munhu wese ari uko
Ruzhinji ruri kurarama uye ini ndinoteedzera ino groove
Bato vanhu vari mumba Mira (rega pfungwa dzako)
Groove (ndiise pamutsetse) Huya tide ziya, mwana
Rega mimhanzi itore kutonga
Rega mutinhimira ufambe
Source: LyricFindVanyori venziyo: Frederick Williams / Robert ClivillesVachakuitisa ziya (Vese Vanotamba Zvino) [Iyo 1991 House Dub / Bonus Beats] lyrics © Sony / ATV Music Publishing LLC, Warner Chappell Music, Inc, Universal Music Publishing Group, Spirit Music Group, Kobalt Music Kudhinda Ltd., Royalty Network
Chinyakare Chivezwa naDavid Bridburg
Picasso yemazuva ano inotanga nemaAfrica masks emadzinza. Kutamba kwakakomberedza moto kwakadzika mukati medu tese.
Mutambi anogona kuvhurwa. Izvo zviri pasi kunyangwe zviitwe sei zvakasarudzika chiitiko chemunhu.
Kuputsa kunopa nzira kune tsika mumunhu. Munhu iye zvino ave panze muzuva.
Tsika naDavid Bridburg
Ine mufananidzo uri nyore, ini ndoda kukusungira zvinhu pamwechete. Whale iri minimalism. Pfungwa yekuona ndeyedu. Chiratidzo chinofanirwa kuve iwo magidhi echisikigo, asi izvo zvakaenda kare. Iyo yakasvibira uye vatema vegungwa vakashanduka kuita mutsvuku.
Maonero edu chete anga ari nyore.
Whale naDavid Bridburg
Ndinovimba kufunga kwangu kunorova chord newe. Ndinoda kufunga kuti hatisi toga.
Ini ndakagumbuka here? Ini ndinowana kutora aya ekuumbwa seangu?
Ndiri wepakutanga zvakakwana here?
Vazhinji maartist vaienda kumberi kwangu vaive kukurudzira kwangu. Kukurukura izvi newe kunokosha kwandiri.
Pane akatiwandei mune zvinyorwa zvangu apo ini ndinokumbira rutsigiro rwako. Parizvino handisi muenzi ane nzara. Ino ndiyo nguva yekupokana kuve muimbi anotambura. lol
Mufaro, Dave Bridburg
Mubvunzo: Unyanzvi hunogona kutaura zvakawanda here? Iwe unogona kuwana ichi chinyorwa chinonakidza kwazvo.